ဘော့လုံးများ လျော့မသွားစေရန် နည်းလမ်း 11 ခု။သင်မည်မျှသိသနည်း။-CZIT
Bolt သည် fixture တွင် အသုံးများသော tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး application သည် အလွန်ကျယ်ဝန်းသော်လည်း ရေရှည်အသုံးပြုပါက connection slack ၊ clamping force မလုံလောက်ခြင်း၊ bolt rust အစရှိသည့် ပြဿနာများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။bolt ၏ ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် စက်၏ အရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှု ထိခိုက်မည်...
Hot Pressed Seamless Elbow ရှည်လျားသောအချင်းဝက်တံတောင်ဆစ်၏ပစ္စည်းသည် stainless steel၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ အလွိုင်းစတီးလ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်- မိလ္လာကုသမှု၊ ဓာတုဗေဒ၊ အပူပိုင်း၊ အာကာသယာဉ်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ စက္ကူနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်း။ပထမဦးစွာ၊ ၎င်း၏ အချင်းဝက် ကွေးညွှတ်မှုအရ ၎င်းကို ခွဲခြားနိုင်သည်...
admin မှ 22-03-02 ရက်နေ့တွင်
အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဝက်အူလှည့်လျှပ်စစ် drill အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဝက်အူလှည့်လျှပ်စစ် drill သည် ဝက်အူများကို တင်းကျပ်ပြီး ဖြေလျော့ရန် အသုံးပြုသည့် ပါဝါတူးလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ပါဝါတူးလ်တွင် တပ်ဆင်မှုလိုင်းတွင် အဓိကအသုံးပြုသည့် ထိန်းညှိခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း torque ယန္တရား တပ်ဆင်ထားပြီး ထုတ်လုပ်မှုအများစုအတွက် လိုအပ်သောကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pipe Fittings MOPIPE သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မြင့်မားသော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသော ပိုက်နို့သီးခေါင်းများနှင့် ပိုက်ဆက်ခံပစ္စည်းများနှင့် အနားကွပ်များကို စုံလင်စွာ တွဲပေးပါသည်။ဓာတုဗေဒနှင့် ရာသီဥတုတိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုက်ဆက်ကြောင်းများနှင့် အနားကွပ်ပစ္စည်းများကို သုံးစွဲသူများသည် မှာယူမှုတိုင်းတွင် ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်များကို ရရှိကြောင်းသေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ စမ်းသပ်ပါသည်။MOPIPE က သေချာပါတယ်...
Weld neck flanges များသည် အဆုံးတွင် weld bevel ပါသော လည်ပင်း extension ဖြင့် လူကြိုက်အများဆုံး flange အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ဤအနားကွပ်အမျိုးအစားသည် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး သဘာဝကျသောပုံစံချိတ်ဆက်မှုပေးစွမ်းရန် ပိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဂဟေဆော်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ပိုကြီးသောအရွယ်အစားနှင့် ဖိအားမြင့်အတန်းများတွင်၊ ၎င်းသည် သီးသန့်နီးပါးဖြစ်သည်...
အလွိုင်းသံမဏိ Threaded Bushing၊ Stainless Steel Forged Bushing၊ SS Forged Bushing ASTM A182 F304/304H၊ ASTM A182 F316/316L Forged Bushing ၊ ASTM A182 F317L Forged Bushing၊ ASTM A182 F321 Forged Bushing၊ ASTM A182 A182 F317L Forged Bushing၊ F44/F45/F51 Forged Bushing၊ ASTM A182 F...
အတုပြုလုပ်ထားသော ပိုက် တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ-လက်ဝါးကပ်တိုင်
cC.Z.IT သည် တတ်နိုင်သောနှုန်းဖြင့် အတုအယောင်လျော့ချခြင်း အမျိုးမျိုးကို ကမ်းလှမ်းရာတွင် ပါဝင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ Crosseကို မတူညီသော အရွယ်အစား၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် အထူများဖြင့် ပေးဆောင်ထားပါသည်။Cross သည် 90 ဒီဂရီ ပြေးပိုက်၏ ကွဲထွက်ခြင်းနှင့် စီးဆင်းမှု ဦးတည်ချက် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော အတုအပ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် အဆိုပါ cr...
CZIT သည် Forged Pipe Nipples ၏ Forged Pipe Nipples ၏ ထိပ်တန်း တင်ပို့သူ၊ တင်သွင်းသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ပိုက်နို့သီးခေါင်းသည် အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိ အမျိုးသားချည်မျှင်များ ပေါင်းစပ်ထားသော ပိုက်အရှည်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ရေပန်းအစားဆုံး အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ချည်နှောင်ထားသော သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ပိုက်နိပ်...
နိုင်ငံတွင်းသာမက နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များတွင်ပါ မြင့်တက်လာသော CZIT သည် အဆင့်မြင့်ဆန်းသစ်သော ပေးသွင်းသူ၊ တင်ပို့သူနှင့် ဖြန့်ချီသူအဖြစ် ဂုဏ်သတင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။A Screwed Cap သည် အများအားဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကြပ် သို့မဟုတ် အရည်ရှိသော ပိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။သူ့ရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်က ကာဗာတစ်ခုရဲ့ အဆုံးကို...
Forged Coupling၊ Stainless Steel Socket weld Full Coupling၊ Carbon Steel Forged Socket weld Half Coupling Stockiest၊ Alloy Steel Reducing Coupling၊ Monel Alloy Socket weld Coupling ပေးသွင်းသူများ။SS Forged Socket weld Coupling၊ Socket weld Coupling၊ Duplex Steel Forged Coupling၊ Super Duplex Steel So...
21-11-04 ရက်နေ့တွင် admin မှ
တံတောင်ဆစ်၊ bushing၊ tee၊ coupling၊ nipple နှင့် union ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုဖြင့် ပေးထားသော Forged Pipe fittings များ။Stainless Steel၊ Duplex Steel၊ Alloy Steel နှင့် Carbon Steel ကဲ့သို့သော ကွဲပြားခြားနားသော ပစ္စည်းများဖြင့် အရွယ်အစား၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အတန်းအစားအလိုက် ရရှိနိုင်ပါသည်။CZIT သည် TEE forged f...
တံတောင်ဆစ်၊ bushing၊ tee၊ coupling၊ nipple နှင့် union ကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော ရွေးချယ်မှုဖြင့် ပေးထားသော Forged Pipe fittings များ။Stainless Steel၊ Duplex Steel၊ Alloy Steel နှင့် Carbon Steel ကဲ့သို့သော မတူညီသော ပစ္စည်းများဖြင့် အရွယ်အစား၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အတန်းအစားအလိုက် ရရှိနိုင်ပါသည်။CZIT သည် 90 Degree El...